शिवसताक्षीको बोर्ड बैठकमा के भयो ? – कमल खबर
Home/समाचार/शिवसताक्षीको बोर्ड बैठकमा के भयो ?
शिवसताक्षीको बोर्ड बैठकमा के भयो ?
२०७७ श्रावण ६, मंगलवार १२:५० गते
तारा शेर्माको घर निर्माणका लागि मेची अभियानलाई अनुमती । दुधे आयुर्वेद औषधालयमा ल्याब सेवा सुरु । पशुपती एकाडेमीले कक्षा १२ को अनुमती पायो, ११ मा कम्प्युटर साईन्समा पनि अध्ययन अध्यापन हुने । झिलझिले माविले व्यवस्थापन संकायमा कक्षा ११ सुरु गर्ने । लालपानी माविले कक्षा ११ मा कुन संकायमा अध्ययन अध्यापन गराउने ?
शिवसताक्षी / झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकाले कनकाई नदिबाट विस्थापित अति विपन्न तारा शेर्माको घर निर्माणका लागि मेची अभियानलाई अख्तियारी दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पहिलो बोर्ड बैठकले घरबारविहीन तारा शेर्माको परिवार व्यवस्थापनका लागि शिवसताक्षी नगरपालिका वडा नम्बर ११ स्थित जनता आवास कार्यक्रम क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि मेची अभियानलाई घर बनाउन बाटो खुलेको हो ।
अभियानका संयोजक विजय डालमियाले असार २८ गते कनकाईमा आएको बाढीले तारा शेर्माको घर बगाएपछि उनको परिवारको व्यवस्थापनका लागि मेची अभियान जुटेको बताएका थिए । शिवसताक्षी नगरले जग्गा दिए अभियानले घर निर्माण गरिदिने संयोजक डालमियाले बताएका थिए । शिवसताक्षी नगरपालिकाको सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले मेची अभियानलाई शेर्माको घर निर्माण गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको नगरका सहायक सूचना अधिकारी डिल्ली नेपालले बताएका छन् ।
कार्यपालिकाको बैठकले शिवसताक्षी नगरपालिका वडा नम्बर ११ मा रहेको दुधे आयुर्वेद औषधालयमा ल्याब सेवा संचालन गर्नेपनि निर्णय गरेको छ । साउन १० देखि आयुर्बेद औषधालयमा ल्याब सेवा सुरु हुने नेपालले जानकारी दिए ।
पछिल्ला दिनहरुमा आयुर्वेद औषधालयमा सर्वसाधरणको आकर्षण बढ्न थालेपछि नगरपालिकाले ल्याब सेवाको आवश्यक्ता महसुस गरेको थियो । दुधे आयुर्वेद औषधालयबाट १० हजार बढी सर्वसाधरणले गत आवमा सेवा लिएका थिए । आयुर्वेद औषधालयमा ल्याव सेवा सुरु भएपछि ईलामको माई नगरपालिका, चुलाचुली गाँउपालिकाका स्थानीय सहित शिवसताक्षी नगरका बासिन्दा लाभान्वित हुने भएका छन् ।
यस्तै शिवसताक्षी नगरपालिका वडा नम्बर ८ को पशुपती एकेडेमीले चालु शैक्षिक सत्र देखी कक्षा १२ संचालनको अनुमती पाएको छ । यसअघि उसले कक्षा ११ को अनुमती पाएको थियो । नगरपालिकाका सहायक सुचना अधिकारी नेपालका अनुसार कक्षा ११ मा एच्छिक विषय कम्प्युटर विज्ञान समेत थप गरिएको छ । नगरको शिक्षा शाखाले अनुगमन गरेपछि मात्र स्वीकृत दिने नगर शिक्षा अधिकारी उपसचिव सुरेन्द्र दाहालले बताए ।
‘बोर्ड बैठकले निर्णय गरेपनि नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले अनुमति दिएपछि मात्र पशुपती एकाडेमीमा कम्प्युटर विज्ञान विषयमा अध्ययन अध्यापन हुने छ,’ शिक्षा अधिकारी दाहालले भने । विद्यालय प्रशासनले पालिकाले तोकेको मापदण्ड पुरा भएको बताएको छ । यसअघि सो विद्यालयमा व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत व्यापार अध्ययन विषयमा अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ ।
यता, शिवसताक्षी नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ झिलझिले स्थित झिलझिले माध्यमिक विद्यालय र वडा नम्बर ७ को लालपानी माध्यमिक विद्यालयलाई पनि कक्षा ११ को अनुमती प्रदान गरेको छ । यस अघिको कार्यपालिका बोर्ड बैठकले ती दुई सामुदायीक विद्यालयलाई कक्षा ११ संचालनका लागि अनुमती दिएको हो ।
झिलझिले माध्यमिक विद्यालयले व्यवस्थापन संकायका लागि स्वीकृत पाएकोे छ भने लालपानी माविले संकाय उल्लेख नगरेको स्वीकृत पत्र बुझेर लगेको समाचार श्रोतले बताएको छ ।
अब शिवसताक्षी नगरपालिकाको शुक्र मावि चन्द्रडाँगी र भानु मावि पारावारीले कक्षा ११ संचालन गर्न बाँकी छ ।